Itheyibhile laseTshayina leShishini lokuThengisa eliLuhlaza elingaLukiweyo leNgxowa yoMthengi kunye noMthengisi | Zhihongda
Sisebenzela ikamva elingcono kunye nehlabathi elinobuhlobo. Ngenxa yoko, sivelisa i-eco-friendly kunye ne-100 yeebhegi ezinokuphinda zisebenze. Ezona zisombululo zilungileyo kwiingxowa zokuthenga okanye iibhegi zeekhothi azizoluki, iingxowa zephe ephothiweyo kunye neengxowa zomqhaphu. Singumvelisi wengxowa yokuthunga engalukwanga, ii-ultrasonic iingxowa ezingalukanga, iingxowa zephe ephothiweyo, iingxowa zomqhaphu, s, kunye neebhegi ze-canvas ezisebenzisa njengebhegi yokuthenga, iingxowa ze-eco-friendly, iibhegi zokwazisa, ibhegi yentengiso, kunye netoti iingxowa;
4. Iibhegi zokuphatha izipho zicocekile kwaye elinye icala liyilo elingenanto (elinye icala ilogo yethu), lilungele nayiphi na. Yihombise ubeke ipeyinti, zoba okanye ubeke istardust ngeenxa zonke kwiingxowa ukuyenza ibe mhle ngokuthandekayo;
Egqithileyo Intengiso yeNtombi eNyulu yeNwele yokuTsala iSilika i-Wig Packaging Bag Satin
Okulandelayo: Iimveliso eziTshisayo eziTshisayo China Sublimation Blank Non-Woven Shopping Bag
Coloured Non womluki Bag
Ibhegi lokuthenga Non ephothiweyo
tote non ephothiweyo
Non ephothiweyo ibhegi tote
zokwazisa ibhegi ephothiweyo
Ihowuliseyili ulwenziwo umgangatho ophezulu b ezimibalabala ...
Enokuphinda ithengwe ngeVenkile yeeNgxowa zeVenkile ebomvu ...